Real Madrid Oo Dalab €220 Milyan Ah Ka Gudbisay Kylian Mbappe Saacado Ka Hor Xilliga Suuqu Xidhmayo - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaReal Madrid Oo Dalab €220 Milyan Ah Ka Gudbisay Kylian Mbappe Saacado Ka Hor Xilliga Suuqu Xidhmayo
Real Madrid Oo Dalab €220 Milyan Ah Ka Gudbisay Kylian Mbappe Saacado Ka Hor Xilliga Suuqu Xidhmayo
August 31, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa dalab €220 milyan oo Euro ah ka gudbisay weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappe saacado ka hor inta aanu xidhmin suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaagan oo saddex saacadood kaddib lasoo afjari doono.
Real Madrid oo hore ay PSG uga diidday saddex dalab oo midkii ugu dambeeyey uu ahaa €200 milyan oo Euro ayaa haddana mid kale oo afraad gudbisay, sida ay warbaahinta Goal shaacisay hadda.
22 jirkan oo ku jira sannadkii ugu dambeeyey qandaraaskiisa Paris Saint-Germain, isla markaana diiday inuu heshiiska u kordhiyo ayay Madrid markii afraad ka hawl-galaysaa, waxaana uu Madaxweyne Florentino Perez samaynayaa isku daygii ugu dambeeyey.
Los Blancos oo xalay sheegtay inay joojisay wada-hadalladii ay kula jirtay PSG ee ay kaga doonaysay Kylian Mbappe una jeedsatayy Eduardo Camavinga oo ay kala soo saxeexatay Rennes ayaa waxa haddana la sheegay in mar kale ay isku day samaynayso.
Los Blancos ayaa dalabkii u horreeyey ee ay ka gudbisay Kylian Mbappe waxa uu ahaa €170 milyan oo Euro, oo ay mar kale ka ka dhigtay €180 milyan oo Euro ka hor intii aanay €200 milyan la shirtegin. Saddexdan dalab waxa soo diidday PSG oo ku adkaysanaysa in aanay iibinayn laacibkan.
Kylian Mbappe oo hadda ku sugan garoonka tababarka xulka qaranka Faransiisku iskugu diyaarinayo kulamada isreeb-reebka Koobka Adduunka, waxa la rumaysan yahay inuu doonayo inuu tago Real Madrid, sidaas ayaanay mar kale kooxda reer Spain dalabka u gudbisay.
Ciyaartii Axaddii ay PSG 2-0 ku garaacday Reims ayuu Kylian Mbappe dhaliyey labada gool, waxaase uu wali afka ka xidhay mustaqbalkiisa oo aanu caddaynin, inkasta oo uu kooxdiisa la wadaagay xaqiiqada ah inaanu qandaraas cusub u saxeexi doonin.